Na-enweghị nkwụsị site na Düsseldorf ruo Caribbean na Mexico
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Na-enweghị nkwụsị site na Düsseldorf ruo Caribbean na Mexico
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • Akụkọ na -agbasa Cuba • Akụkọ kacha ọhụrụ na Dominican Republic • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
TUI Fly Deutschland, nke bụbu TUI Fly nwere, mgbe ọ tụlesịrị ogologo oge, kpebiri ịmalite ụgbọ elu Boeing 787 Dreamliners dị ogologo site na Düsseldorf International Airport (DUS) gaa Mexico na Carribean. Nke a pụtakwara ozi ọma maka ịgbasawanye njem ụgbọ mmiri Caribbean.
Na Caribbean na Mexico, TUI Fly nwere arụmọrụ jikọtara Duesseldorf na
Ruo ọtụtụ iri afọ Duesseldorf abụwo ọkacha mmasị maka ụgbọ elu gaa ebe ezumike ndị ama ama. Na LTU, Air Berlin Monarch Airlines na nso nso a Thomas Cook si na foto a, enwere uzo ozo ugbo elu iji mejupu agụụ. DUS nwere ụgbọ elu karịa ihe karịrị 190 ebe ụwa niile na-elekọta 70 ụgbọ elu,
TUI ofufe bụ aha akara nke TUI Airlines Belgium nv. Ugbo elu TUI bụ akụkụ nke TUI Group, otu ndị njem kachasị na ụwa, yana isi ụlọ ọrụ ya na Hannover, Germany.
TUIFly Deutschland (Germany) nọ na-elele anya n'ọdụ ụgbọ elu mba Duesseldorf iji wepụta ọrụ ogologo oge iji Boeing 787 Dreamliner. Abụọ n'ime B787 ha ga-adabere na Duesseldorf.
Duesseldorf bụ isi obodo steeti Northrhine Westphalia nke kachasị biri na Germany yana ebe ngosi, njem, azụmahịa, na njem na Germany.
Linegbọ elu ụgbọ elu ndị German nke dị na Langenhagen họọrọ Düsseldorf n'ihu ọtụtụ ọdụ ụgbọ elu ndị ọzọ nke German mgbe ha tụsịrị uru na ọghọm.
Ọ bụ ezie na ekwupụtabeghị ụbọchị maka ụgbọ elu ọhụrụ ahụ, a ga-ekekọta ha na ụgbọ mmiri TUI nke Marella na-arụ ọrụ na Puerto Plata, Cozumel na Costa Maya.
Ka ọ dị ugbu a, naanị Eurowings na-arụ ọrụ ụgbọ elu ụgbọ elu ogologo oge site na Düsseldorf. Nke a bụ n'agbanyeghị na onye nwe Eurowings bụ Lufthansa na-ekwu na ha chọrọ ịkwụsị ụzọ niile dị ogologo site na njedebe nke 2020 n'oge kachasị ọhụrụ.